ကယ်ရိုလိုင်း Young ကကလဲ့စားများအတွက်သူမ၏မြေးအသတ်ခံရ
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု
သက္ကရာဇ်ဆိုလို & Origins
ဗိုလ်မှူးကိန်းဂဏန်းများ & Events
ဘာသာတရား & ဝိညာဉ်ရေး
Origins & ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
ဘုရားမဲ့ဝါဒ & Agnosticism
စီမံကိန်းများ & စမ်းသပ်မှု
Tours မှ & ပြိုင်ပွဲများ
ဂီယာ & ပစ္စည်း
ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့
မဟာဗျူဟာ & လေ့လာ
Espanol en Inmigracion
by ချားလ်စ် Montaldo
ကာရိုလိုင်းနား Young ကသူမ၏နှစ်ခုမြေးသတ်မှုဖြင့်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သူတစ်ဦးက 51 နှစ်အရွယ်အဖွားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သေဒဏ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Young ကသူမရဲ့မြေးရဲ့အဖေနှင့်အတူချုပ်နှောင်ထားစစ်တိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းလေ့လာပြီးနောက်အသေသတ်ခြင်းကိုအမြိုးသားအထိုး။
Young ကသူတို့ရဲ့မိခင်, Vanessa တောရက်စ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမ၏နှစ်ခုမြေး၏ချုပ်နှောင်ထားလက်ခံရရှိ, မသင့်တော်သောယူဆခဲ့သူမကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
တောရက်စ်ဇွန်လ 18, 1993, အလူသတ်မှု၏နေ့၌သူမ၏မိခင်ရဲ့အဝတ်အစားပေါ်တွင်သွေးကိုမွငျလြှငျ, ပြီးတော့သည်သူ၏လည်ချောင်းဖြတ်နှင့်အတူသေအိပ်ရာပေါ်လဲလျောင်း, သူမ၏သား,6နှစ်အရွယ်သား, Darrin တောရက်စ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ကာရိုလိုင်းနား Young ကဝမ်းဗိုက်အနည်းဆုံးတစ်ဒါဇင်ကြိမ်မိမိကိုယ်ကိုဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သည်။ တောရက်စ် Darrin တက်ခူးပြီးတော့ရဲဌာနမှဖုန်းခေါ်ထားရှိသည့်အခါလူငယ်တို့အခြားအခန်းသို့4နှစ်အရွယ်ဒိုင်-Zshia တောရက်စ်ကို ယူ. ဓားဖြင့်ထိုးခြင်းနှင့်အသေခံရန်သူမ၏သည်အထိသူမ၏မှာလျှော့ချ ။ သူမ၏ဘေးတွင်သေလွန်သောသူတို့သည်ထိုသူငယ်နှင့်အတူလူငယ်အကြိမ်ကြိမ်သူမမရှိတော့အသက်ရှင်နေထိုင်စေချင်ကြောင်းသူမ၏သမီးကိုပြောသည်။
သူမသည်သူ၏ဖခင်မှကောင်လေးက၏ချုပ်နှောင်ထားဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းမျက် ထွက်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောရက်စ်၏အဆိုအရသူမ၏မိခင်ကယ်ရိုလိုင်းနား Young က, အမြိုးသားအသတ်ကြ၏။ သူကနိုင်ငံတော်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသူကနောက်ကျောကလေးအထောက်အပံ့အတွက် $ 12000 အကြွေးကြောင်းကြားပြောလေ၏သည်အထိဖခင် Barrington ဘရုစ်, ဗာဂျီးနီးယားကနေရေကြောင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှု, သူတစ်ဦးသားခဲ့ကြောင်းမသိခဲ့ပါ။ ထို့နောက်သူသည် Darrin ၏ချုပ်နှောင်ထားဘို့တရားရုံးအသနားခံကလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဘရုစ်ဟာလူသတ်မှုကဲ့သို့တူညီသောနေ့၌ဂလားပင်လယ်အော်ဧရိယာရောက်ရှိလာခဲ့လေသည်။ သူ Darrin ကောက်နဲ့ဗာဂျီးနီးယားရှိသူ၏နေအိမ်တစ်ခုအမြဲတမ်းအခြေခံပေါ်မှာသူ့ကိုရောက်စေဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်လူငယ်တို့သည်ဤသို့ရေးခဲ့ "ငါပင်ငါနှင့်ငါ့ဥစ္စာကိုထိခိုက်စေသောသူအပေါင်းတို့သည်အတူရရှိရန်ယခုသောင်းကျန်းအပေါ်အလွန်မပျော်ဝိညာဉျကိုဖြစ်ကြောင်းကို" စိတျအပိုငျးတကားဟုသူမကသူတို့ကိုသတ်ဖြတ်သောနေ့၌သူမ၏မြေးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အဘထံသို့စာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည် ယောက်ျားလေးရဲ့အဖေ။
"ငါကသင်အမှန်တကယ်ကိုချစ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးဖို့ခံစားရပုံကိုသင်ပြပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ။ ။ သင်၏သမီး။ ငါ။ သူမ၏အဘို့အပြန်သင်၏မယားငါပြန်လာပြီးရရှိမည်ရှိပါတယ်တိုင်းကလေးလာမယ့်တာပါ။ "
အစိုးရရှေ့နေကဲန် Burr အမြိုးသားအအသတ်ခံရမတိုင်မီကပြောပါတယ်, Young က "ငါကလေးတွေကိုသတ်ခြင်းနှင့်ငရဲသို့ငါနှင့်အတူသူတို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ " မိတ်ဆွေတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့သည်
လူငယ်တို့ရဲ့ရှေ့နေများကသူမများကအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရမဖြစ်သင့်ကြောင်းစောဒကတက် ရူးသွပ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်း နှင့်လူသတ်မှု premeditated မကြောင့်အလွန်အများဆုံးဒုတိယဒီဂရီလူသတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားရပါမည်မှာ။
အဆိုပါဂျူရီ Young ကပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှု၏အပြစ်ရှိကြောင်းကြီးနှင့်သေဒဏ်ခံယူသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီရုံနှစျခုနဲ့တစ်နှစ်ခွဲနာရီဆွေးနွေးခဲ့သည်။
တရားခွင်၏ပင်နယ်တီအဆင့်စဉ်အတွင်း Barrington ဘရုစ်သူသူက "ခရစ္စမတ် 10 ကိုချီးမြှင့်" ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရပေမယ့်သူကိုတွေ့သောအခါ "မှောင်မိုက်သောမိုဃ်းတိမ်ငါ့ကိုကျော်တို့သည် လာ. " သူကဆက်ပြောသည်အကြောင်း, မိမိသား Darrin ၏ချုပ်နှောင်ထားခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းလေ့လာသင်ယူသောအခါသက်သေခံ မိမိသားကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တော့ပါ။
လူငယ်တို့၏ရှေ့နေမိုက်ကယ် Berger သူမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမမာကြောင့်သူမသည်လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သောကပြောသည်။
Berger "ဘာကိုသင်တို့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့နေမကောင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်နှင့်ငါတို့သည်နေမကောင်းလူတွေ execute ပါဘူးဘယ်မှာနှောင်းပိုင်း 20 ရာစုအတွင်းအမှတ်သို့ရောက်ရှိကြပါပြီ" တရားသူကြီးကိုပြောသည်
သာလွန်တရားရုံးတရားသူကြီးစတန်လေကိုရွှေသူမ၏စိတ်ခံစားမှုပြဿနာများသူမလုပ်နေခဲ့ရာသိရန်သူမ၏စွမ်းရည်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့သညျကား, လူငယ်တို့၏ Berger ရဲ့အကဲဖြတ်နှင့်အတူသဘောတူခြင်းမရှိပေ။ အဆိုပါတရားသူကြီးပြီးတော့အသေသတ်ခြင်းကိုလူငယ်ထောင်ဒဏ်။
သေဆုံးဝါကျထုတ်ပေးရန်အတွက်, တရားသူကြီးလူငယ်ရဲ့အမူအကငျြ့ "လူ့အဖွဲ့အစည်းမှလုံးဝရွံ" နှင့် "ဟုသားသမီးများ၏သတ်ဖြတ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သေခြင်းဖြစ်၏။ "
Carolyn Young ကအစဉ်အဆက်ပေးထားသောပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် သေဒဏ် Alameda ကောင်တီအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ကြသည်။
စက်တင်ဘာလ 6, 2005 တွင်, Young က Chowchilla ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိဗဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားအမျိုးသမီးများနေ့ Facility မှာကျောက်ကပ်ပျက်ကွက်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။
သဘာဝအသေခံသည်သေခြင်းအတန်းအကျဉ်းသားကယ်လီဖိုးနီးယား၌သေသောအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 1976 ခုနှစ်မှစ. လူသတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှား 13 ယောက်ျားကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကွပ်မျက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကွပ်မျက်ခံရနောက်ဆုံးမိန်းမသည်မိမိသမီး-In-ပညတ်တရား၏လူသတ်မှုစီစဉ်၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့တဲ့အဲလစ်ဇဘက်အန်း Duncan ကဖြစ်ခဲ့သည်။
Duncan က 1962 ခုနှစ်မှာဓာတ်ငွေ့အခန်းထဲကနေဖြင့်ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
Shawn Hornbeck ပြန်ပေးဆွဲ: အဘယ်ကြောင့်သူ Away သူ့ဖမျးဆီးခြုပျနှော မှစ. Run မဟုတ်
Nate Kibby ၏ပြစ်မှု
အဆိုပါချားလ်စ် Manson မိသားစု
မာရိသညျ Winkler များ၏စမ်းသပ်
ရပ်ကွက် Weaver ဖြစ်ရပ်မှန်: အက်ရှလေရေကန်နှင့် Miranda Gaddis လူသတ်မှု
အဲရစ် Rudolph များ၏ဖြစ်ရပ်မှန်: အဆိုပါအိုလံပစ်ပန်းခြံဗုံးကြဲလေယာဉ်
အဆိုပါအမ်မလီ Sander လူသတ်မှုဖြစ်ရပ်မှန်
ဂျော်ဂျီယာ - ရာဇဝတ်မှုသားကောင်များ '' ခငြ့်အရေး
အမျိုးသမီးရာဇဝတ်သားများ, လူသတ်မှု, အဓမ္မပြုကျင့်, ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်သူခိုးတစ်ဦးက - Z ကို
Killer ရဲ Antoinette ကဖရန့်၏ရာဇဝတ်မှုများကို
Shanda SHARER ၏လူသတ်မှု
ထိပ်တန်း 10 လွတ်လပ်သော Pop ဂီတမှတ်တမ်း Labels:
သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်အကြောင်းကိုသိမှ 10 အရာ
Leonardo da Vinci ရဲ့စတိုင်နှင့် Palette
ဝါသနာ & လှုပ်ရှားမှုများ
ရုပ်မြင်သံကြားသမိုင်းနှင့် cathode ray tube
Celebrity ပုဂံနှင့် Wiccans
ခရစ္စမတ်ရာသီ၏ 18 ဂန္ထဝင်ကဗျာများ
Cantwell v ။ Connecticut (1940)
တူညီသည့်အ ionic စွပ်စွဲချက်နှင့်အတူ periodic ဇယား
'' GHIN, 'နှင့်မည်သို့ Do ဂေါက်သီးဒါဟာသုံးပါကဘာလဲ?
စိတ်ဝင်စားဖို့သင့် Class ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ 10 နည်းလမ်းများ
တစ်ဦးစောင့်များစာရင်းပိတ် Get လုပ်နည်း
ခရစ်ယာန်အဆိုတော် Ray Boltz, ထွက်လာသူတစ်ဦးပုံမှန်ဂေးဘဝကဘဝအသက် Says
ကက်ရှမီးယားအပေါ်ဆန္ဒခံယူပွဲအဘို့အ Calling 1949 ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်၏စာသားမ
"Romeo နဲ့ Juliet ၏ Seussification"
လမ်းမကြီး Rage ၏ကြီးထွားလာသောပြဿနာ
Ergo 101 - Ergonomics ကဘာလဲ?
အိုဘဝါး Mio Lyrics နှင့်အင်္ဂလိပ်စာသားဘာသာပြန်စာပေ
သင်ကဟယ်ရီပေါ်တာလိုပဲ အကယ်. စာအုပ်များ Read ရှိရမည်
'' Ninguno '' အများအားဖြင့် singular Form ကိုအသုံးပြုထားတဲ့
© 2020 my.eferrit.com